🥇 ▷ Xiaomi Redmi note 8 (Pro): oo leh 64 MP kamarado muuqaal ah iyo sida daabacadaha WoW ✅
Xiaomi Redmi note 8 (Pro): oo leh 64 MP kamarado muuqaal ah iyo sida daabacadaha WoW
Taasi Redmi Note 8 Pro waxay ahayd taleefanka casriga ah ee ‘Quad-camera smartphone’ oo leh 64-MP dareeme ah oo aan wax sir ah ka ahayn muddo. Maanta, Xiaomi waxay si rasmi ah u shaacisay astaanta cusub ee astaan-hoosaadkeeda iyo nooca rasmiga ah. Redmi Note 8 Pro ayaa sidoo kale lagu sii deyn doonaa laba qoraal oo World Warcraft ah.
Xusuusin 8 Pro: flagship oo leh kamarad 64 MP dunida ugu horreysa
Sida casriga ugu horreeya adduunka, Redmi Note 8 Pro illaa 64-MP CMOS sensor nooca Isocell GW1 oo laga keenay Samsung. Si lamid ah 48 MP CMOS sensor ee midka ugu yar ee Note 8 wuxuu taageeraa pixel binning, halkaas oo afar pixels ay aasaaska u tahay pixel, qabashada nal badan.
Kaameeraha weyn ee megapixel 64 melapixel oo leh laba laydh Flash ah waxaa weheliya 8 megapixel sensor angle ballaaran, kamarad 2 megapixel macro iyo 2 megapixel a sensor qoto dheer. Tallaaabyada tartiib tartiib ah illaa 960 meegaar halkii sebil iyo UHD fiidiyowyo 30 fiyuus ilbiriqsiyo, sidoo kale HDR iyo duruufaha panoramic ayaa sidoo kale macquul ah. Aaladda 20 MP ee hore waxay u oggolaaneysaa duubista fiidiyowga HD buuxa ee 30 firaaq ah halkii seb.
Calanka cusub ee NoteXiaomi ma isticmaalo soo bandhigida OLED, taa bedelkeed wuxuu door bidaa 6.5 inji, 2.3-by-1080-pixel, 19.5-to-9 LCD panel. Telefonka casriga ah waxaa ilaaliya Gorilla Glass 5 xagga hore iyo xagga dambe. Sawir-qaadeha sawirka faraha si uu u furo taleefanka casriga ah wuxuu ku yaal dhabarka.
muuqaal 1 Of 3
MediaTek Helio G90T, ugu badnaan 8 GB Ram iyo 128 GB flash memory
Helio G90T Xiaomi wuxuu ku tiirsan yahay SoC laga soo diro MediaTek. Mitirka 12 nm wuxuu leeyahay lix Cortex-A55 iyo labo Cortex-A76 oo leh saacad isku celcelis ah oo gaareysa 2.27 GHz. Sida unugyada sawirada, Mali G76 GPU ayaa loo isticmaalaa. Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira ikhtiyaar ah 6 ama 8 GB oo RAM ah liiska qalabka, kaas oo lagu daray 64 ama 128 GB xusuusta tooska ah iyadoo loo eegayo heerka UFS 2.1.
Isugeyn afar anteenooyin WLAN ah ayaa bixiya Redmi Note 8 Pro oo leh Wi-Fi a / b / g / n / ac, waxay sidoo kale taageerta taleefanka gacanta ee NFC.
4.500mAh oo leh koronto degdeg ah, USB-C iyo 3,5mm jaakadood
Batariga si deeqsinimo leh baaxadeedu waa 4,500 mAh waxaana lagu dallaci karaa iyadoo la adeegsanayo USB-C illaa 18 watts iyadoo laga mahadcelinayo tikniyoolajiyada dhakhsaha ah. Sidoo kale waxaa la bixiyaa waa isku xirka jaakadaha 3.5 mm.
Xiaomi wuxuu sidoo kale ku soosaaraa taleefanka gacanka casriga laba qoraal oo khaas ah oo ah “Isbahaysiga” iyo “Horde”, isaga oo abaal marin u siiya iskaashikiisa Blizzard. Labada shirkadoodba waxay rabaan inay iskaashi dheeraad ah yeeshaan mustaqbalka. Hase yeeshe waqtigaas, daabacadaha WoW waxaa kaliya loogu talagalay Shiinaha.
Redmi note 8 Pro ee “Isbahaysiga” -… (Sawirka: Xiaomi)
… Iyo Daabacaadda “Horde”. (Sawirka: Xiaomi)
Fiiro gaar ah 8: 48 MP Quad camera oo leh qalabka ‘isocell sensor’
Kooxda kaamirada ee ‘Redmi Note 8’ ka kooban waxay kakooban yihiin afar dareemayaal. Kaameeraha ugu weyn waxay leeyihiin Samsung-ka cusub ee loo yaqaan ‘GM2 ISOCELL sensor’ oo leh 48 megapixels, taas oo ay ugu wacan tahay qabashada aaladda F / 1.8 gaar ahaan iftiinka sare. Intaa waxaa sii dheer, taleefannada casriga ah waxay leeyihiin muraayad ballac leh oo leh 8-megapixel, kamarad laba-megapixel ah iyo aaladda 2-megapixel qoto dheer. Dhanka hore waa Redmi Note 8 oo ah 13-megapixel camera.
Qeybta hoose ka hooseysa waa 6.39 inji 19.5: 9 shaashadda LCD ah oo xallineysa waxyaabaha ka kooban 2,340 × 1,080 pixels. Khabiirka sawirka faraha ayaa wali laga heli karaa gadaasha taleefanka gacanta.
Snapdragon 665, ugu badnaan 6 GB Ram iyo ilaa 128 GB Flash
Wadnaha ‘Redmi Note 8’ wuxuu sameyaa Octacore Snapdragon 665 SoC kaasoo wadar ahaan wadar ahaan sideed Qualcomm Kryo 260 xirmooyin ah ilaa 2 GHz. Afar koorso waxaa loogu talagalay korantada iyo afar kale oo loogu talagalay hufnaanta tamarta. Processor-ka wuxuu taageero ka helayaa unugyada garaafyada cusub ee Adreno 610. Qalabka loo yaqaan ‘Snapdragon 665’ sidoo kale waxaa ku jira modem LTE modem (Cat 12) ilaa 600 Mbps hoos iyo 150 Mbps dhanka sare ah, iyo sidoo kale taageerada Bluetooth 5.0 LE iyo dual-band ac WLAN.
Xusuusta ayaa ah afar ama sideed gigabytes cabir ahaan waxaana lagu daray 64 ama 128 GB ee xusuusta tooska ah. Batteriga ka yar labada nooc ee Note-8 waxaa si qayaxan loogu qiyaasey awoodoodu tahay 4,000 mAh waxaana lagu dallaci karaa ilaa 18 watts iyadoo loo mahadcelinayo tikniyoolajiyada Degdegga ah ee loo yaqaan USB 2.0 Type-C.
Redmi note 8 Pro waa inuu diyaar ahaadaa iibsiga laga bilaabo 17ka Sebtember sicirro ka bilaabmaya 175 euro oo ay ku jiraan lix GB oo RAM ah iyo 64 GB oo ah xusuusta tooska ah. Wixii loogu talagalay 8 GB RAM iyo 128 GB wicitaannada Flash Xiaomi waxay isu beddeleen 225 euro. Redmi note 8 waxaa lagu yaboohay 4 GB oo ah RAM iyo 64 GB oo ah xusuusta gudaha gudaha Shiinaha oo kaliya laga badalay 126 euro. Kaladuwanaanshaha iskudarka 6GB iyo 64GB iyo sidoo kale 6GB iyo 128GB waxay noqonayaan 151 siday u kala horreeyaan 176 euro. Laga soo bilaabo marka labada moodel ee cusub ee NoteXiaomi aysan wali shaacin.